परमेश्वरको राज्य​—येशूको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मले माया मालागासी माल्टिज मूर म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | परमेश्वरको राज्य—यसले तपाईंको लागि के गर्नेछ?
परमेश्वरको राज्य—येशूको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ?
येशूले पृथ्वीमा प्रचार गर्नुहुँदा थुप्रै विषयमा कुरा गर्नुभयो। उदाहरणको लागि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना कसरी गर्ने, परमेश्वरलाई खुसी बनाउन के गर्नुपर्छ र साँचो आनन्द कसरी पाउने भनेर सिकाउनुभयो। (मत्ती ६:५-१३; मर्कूस १२:१७; लूका ११:२८) तर येशूले सबैभन्दा धेरै परमेश्वरको राज्यको विषयमा कुरा गर्नुभयो र उहाँ यही विषयमा कुरा गर्न मन पराउनुहुन्थ्यो।—लूका ६:४५.
अघिल्लो लेखमा बताइएझैं “परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको प्रचार र घोषणा” गर्नु नै येशूको जीवनको मुख्य काम थियो। (लूका ८:१) मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यबारे बताउन उहाँ इस्राएलको भूमिमा सयौं किलोमिटर हिंड्नुभयो र यसरी उहाँले यो काममा कडा मेहनत गर्नुभयो। येशूले गर्नुभएको प्रचारको कामबारे बाइबलको मत्तीदेखि यूहन्नासम्मको किताबमा लेखिएको छ। यी किताबहरूमा परमेश्वरको राज्यबारे १०० पटकभन्दा धेरै उल्लेख गरिएको पाउँछौं अनि यीमध्ये प्रायजसो त येशूले नै बताउनुभएका कुराहरू हुन्‌। तर उहाँले परमेश्वरको राज्यबारे बताउनुभएका कुराहरूको यो एउटा सानो अंश मात्र हो!—यूहन्ना २१:२५.
येशू पृथ्वीमा हुनुहुँदा उहाँले परमेश्वरको राज्यलाई किन त्यत्ति धेरै महत्त्व दिनुभयो? किनभने परमेश्वरले आफ्नो राज्यको राजाको रूपमा येशूलाई नै नियुक्त गर्नुभएको कुरा उहाँलाई थाह थियो। (यशैया ९:६; लूका २२:२८-३०) तर उहाँले आफ्नो लागि शक्ति र महिमा पाउन मात्र परमेश्वरको राज्यलाई महत्त्व दिनुभएको थिएन। (मत्ती ११:२९; मर्कूस १०:१७, १८) हो, येशूले आफ्नै फाइदाको निम्ति परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभएको थिएन। बरु परमेश्वरको राज्यले येशूले माया गर्ने व्यक्तिहरू अर्थात्‌ स्वर्गमा हुनुहुने उहाँको बुबा यहोवा र उहाँका वफादार चेलाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने थियो। त्यसैले उहाँ त्यस राज्यमा चासो लिनुहुन्थ्यो र अहिले पनि चासो लिनुहुन्छ। *
परमेश्वरको राज्यले स्वर्गमा बस्नुहुने येशूको बुबाको लागि के गर्नेछ?
येशू स्वर्गमा बस्नुहुने आफ्नो बुबालाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। (हितोपदेश ८:३०; यूहन्ना १४:३१) उहाँको बुबाका राम्रा गुणहरू जस्तै प्रेम, दया र न्यायको येशू धेरै कदर गर्नुहुन्छ। (व्यवस्था ३२:४; यशैया ४९:१५; १ यूहन्ना ४:८) त्यसैले उहाँ आफ्नो बुबाको विषयमा फैलाइएका झूटहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। जस्तै: मानिसजातिले भोगिरहेका दुःखकष्टमा परमेश्वरले कुनै चासो राख्नुहुन्न र हामीले दुःख भोगोस् भन्ने परमेश्वरकै इच्छा हो भन्ने जस्ता झूटहरू। त्यसैले येशू “राज्यको सुसमाचार” प्रचार गर्न आतुर हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँको बुबाको नाउँमा लागेको सबै कलङ्क परमेश्वरको राज्यले मेटाउने छ भनेर उहाँलाई थाह थियो। (मत्ती ४:२३; ६:९, १०) तर त्यस राज्यले कसरी यसो गर्नेछ?
यहोवा परमेश्वरले आफ्नो राज्यमार्फत मानिसजातिको हितको लागि ठूलठूला परिवर्तनहरू ल्याउनुहुनेछ। उहाँले वफादार मानिसहरूका “आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ।” उहाँले आँसुका कारणहरूलाई हटाउनुहुनेछ अर्थात्‌ “मृत्यु हुनेछैन, न त फेरि कहिल्यै शोक, रुवाइ वा पीडा नै हुनेछ।” (प्रकाश २१:३, ४) परमेश्वरले आफ्नो राज्यमार्फत्‌ मानिसहरूले भोगिरहेका सबै दुःखकष्टको अन्त गरिदिनुहुनेछ। *
त्यसैले त परमेश्वरको राज्यको विषयमा मानिसहरूलाई बताउन येशू उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। त्यस राज्यले उहाँको बुबा कत्ति शक्तिशाली र दयालु हुनुहुन्छ भनेर देखाउनेछ भनी उहाँलाई थाह थियो। (याकूब ५:११) साथै उहाँले माया गर्नुहुने व्यक्तिहरू अर्थात्‌ सही तरिकामा परमेश्वरको उपासना गर्ने वफादार मानिसहरूका लागि त्यस राज्यले थुप्रै लाभहरू ल्याउनेछ भनेर पनि उहाँलाई थाह थियो।
परमेश्वरको राज्यले उहाँका वफादार सेवकहरूका लागि के गर्नेछ?
पृथ्वीमा आउनुभन्दा धेरै समयअघि येशू आफ्नो बुबासितै स्वर्गमा बस्नुहुन्थ्यो। बुबाले सबै कुरा अर्थात्‌ अनगिन्ती तारा र तारापुञ्ज भएको भव्य आकाशको साथै अत्यन्तै सुन्दर पृथ्वी र त्यहाँ बस्ने जङ्गली जनावरहरू सृष्टि गर्न येशूलाई नै चलाउनुभयो। (कलस्सी १:१५, १६) तर सबै सृष्टिहरूमध्ये येशूको “आनन्दचाहिं मानव जातिमा थियो,” मतलब उहाँ मानिसहरूमा विशेष चासो लिनुहुन्थ्यो।—हितोपदेश ८:३१.
येशूले प्रचार गर्नुको मुख्य कारण मानिसहरूप्रतिको माया नै थियो। आफू मदतको खाँचोमा परेकाहरूलाई “सुसमाचार सुनाउन” पृथ्वीमा आएको हुँ भनी उहाँले प्रचार गर्न थाल्नुभएदेखि नै स्पष्ट पार्नुभयो। (लूका ४:१८) तर त्यो कुरा उहाँले आफ्नो बोलीमा मात्र सीमित राख्नुभएन। बरु बारम्बार मानिसहरूलाई माया गरेको कुरा कामद्वारा देखाउनु पनि भयो। उदाहरणका लागि एक पटक उहाँको कुरा सुन्न एउटा ठूलो भीड जम्मा हुँदा “तिनीहरूलाई देखेर उहाँ टिठाउनुभयो अनि उहाँले बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो।” (मत्ती १४:१४) एक चोटिको कुरा हो, येशूले निकै पीडादायी रोग लागेको एक जना मानिसलाई भेट्नुभयो। येशूले चाहनुभएमा तिनलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्दै ती मानिसले उहाँमा विश्वास गरेको कुरा देखाए। प्रेमले गर्दा नै येशू ख्रीष्ट ती व्यक्तिलाई निको पार्न उत्प्रेरित हुनुभयो र उहाँले मायालुपूर्वक यसो भन्नुभयो: “मसित इच्छा छ। तिमी शुद्ध भइजाऊ।” (लूका ५:१२, १३) अर्को एउटा घटनामा येशूको साथी मरियम आफ्नो भाइ लाजरसको मृत्युको कारण शोक गरिरहेकी थिइन्‌। यो देख्दा ‘अत्यन्तै विचलित भएर येशूले सुस्केरा हाल्नुभयो’ अनि उहाँ “रुनुभयो।” (यूहन्ना ११:३२-३६) त्यसपछि एउटा अचम्मको कुरा भयो—लाजरस मरेको चार दिन भइसकेको भए तापनि येशूले तिनलाई ब्युँताउनुभयो!—यूहन्ना ११:३८-४४.
येशूले त्यसबेला गर्नुभएको मदतले मानिसहरूलाई सधैंका लागि लाभ पुऱ्याएको थिएन। आफूले निको पारेका मानिसहरू फेरि बिरामी हुनेछन्‌ अनि पुनर्जीवित पारेका मानिसहरू फेरि मर्नेछन्‌ भनेर उहाँलाई थाह थियो। तर परमेश्वरको राज्यले यस्ता समस्याहरूको चिरस्थायी समाधान गर्नेछ भनेर पनि उहाँलाई थाह थियो। त्यसैले त येशूले चमत्कारहरू मात्र गर्नुभएन। उहाँले “राज्यको सुसमाचार” पनि जोडतोडले प्रचार गर्नुभयो। (मत्ती ९:३५) येशूले गर्नुभएका चमत्कारहरू भविष्यमा परमेश्वरको राज्यले संसारभरि गर्ने कामको एउटा सानो झलक मात्र थियो। परमेश्वरको राज्यले पृथ्वीमा शासन गर्दा के-के हुनेछ भन्ने विषयमा बाइबलमा गरिएका प्रतिज्ञाहरूलाई ध्यान दिऔं।
स्वास्थ्य समस्याहरू हुनेछैन।
“तब अन्धाहरूका आँखा खोलिनेछन्‌, र बहिराहरूका कान उघारिनेछन्‌। तब लङ्गडा मृगझैं उफ्रनेछ, र गूङ्गाको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ।” साथै “त्यहाँका बासिन्दाहरूले यसो भन्नेछैनन्‌, ‘म बिरामी परें।’”—यशैया ३३:२४; ३५:५, ६.
“उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुभएको छ, र परमप्रभु परमेश्वरले सबैका आँखाबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ।”—यशैया २५:८.
मरिसकेकाहरू फेरि जीवित हुनेछन्‌।
“चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको सोर सुन्नेछन्‌ र बाहिर निस्किआउनेछन्‌।”—यूहन्ना ५:२८, २९.
‘मानिसहरू पुनर्जीवित हुनेछन्‌।’—प्रेषित २४:१५.
कोही पनि घरबारविहीन वा बेरोजगार हुनेछैन।
“तिनीहरूले घर बनाएर तिनमा बास गर्नेछन्‌, र तिनीहरूले दाखबारी लगाएर तिनका फल खानेछन्‌। तिनीहरूले बनाएर अरूहरू बस्ने, र तिनीहरूले रोपेर अरूहरूले खानेचाहिं हुनेछैन। . . . छानिएकाहरूले आफ्ना हातले गरेका काम धेरै दिनसम्मै भोग गर्नेछन्‌।”—यशैया ६५:२१, २२.
“पृथ्वीको अन्तसम्मै उहाँले युद्धहरू रोक्नुहुन्छ।”—भजन ४६:९.
“एउटा जातिले अर्को जातिको विरुद्धमा तरवार उठाउनेछैन, औ तिनीहरूले अबउप्रान्त युद्ध गर्न सिक्नेछैनन्‌।”—यशैया २:४.
खानाको अभाव हुनेछैन।
“तब पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी बढाउनेछ, र परमेश्वर, हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ।”—भजन ६७:६, NRV.
“पृथ्वीमा पहाडका टाकुराहरूमा प्रशस्त गरी अन्न हुनेछ।”—भजन ७२:१६.
“दरिद्रहरूलाई सधैंभरि बिर्सनुहुनेछैन।”—भजन ९:१८.
“दरिद्रहरूको पुकारा सुनेर उसले छुटकारा दिनेछ। र सहायता नभएका दु:खीहरूलाई उसले छुटकारा दिनेछ। कमजोर र दरिद्रलाई उसले टिठाउनेछ, र दरिद्रहरूको प्राण उसले बचाउनेछ।”—भजन ७२:१२, १३.
परमेश्वरको राज्यबारे गरिएका यी प्रतिज्ञाहरू विचार गर्दा येशूको लागि परमेश्वरको राज्य किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर के तपाईंले बुझ्नुभयो? येशू पृथ्वीमा हुनुहुँदा आफ्नो कुरा सुन्ने जति सबैलाई परमेश्वरको राज्यबारे बताउन उहाँ उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। किनभने यस राज्यले मानिसहरूले भोगिरहेका सबै समस्याहरूको अन्त गरिदिनेछ भनेर उहाँलाई थाह थियो।
परमेश्वरको राज्यको विषयमा बाइबलमा गरिएका प्रतिज्ञाहरू के तपाईंलाई मन पऱ्यो? त्यसो हो भने, तपाईं त्यस राज्यको विषयमा अझ धेरै कुरा कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ? अनि त्यस राज्यले ल्याउने आशिष्‌ पाउन तपाईंले के गर्नुपर्छ? यसपछिको लेखमा तपाईंले ती प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुहुनेछ।
^ अनु.5यस लेखमा येशूले परमेश्वरको राज्यबारे महसुस गर्नुहुने कुरा वर्तमान कालमा लेखिएको छ। किनभने येशू अहिले स्वर्गमा जीवित हुनुहुन्छ र स्वर्ग फर्कनुभएपछि पनि उहाँको चासोको मुख्य विषय परमेश्वरको राज्य नै रहेको छ।—लूका २४:५१.
^ अनु. 8 परमेश्वरले अहिले किन दुःखकष्ट रहिरहन दिनुभएको छ भन्ने विषयमा बुझ्न यहोवाका साक्षीहरूद्वारा प्रकाशित बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ११ हेर्नुहोस्।
दुष्टता कसरी सुरु भयो अनि परमेश्वरले किन अहिलेसम्म दुःखकष्ट रहिरहन दिनुभएको छ? के कहिल्यै दुःखकष्टको अन्त होला?